Magnesium L-thironate vovoka (778571-57-6) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Nootropics vovoka / Vovoka magnesioma L-threonate
Rating: SKU: 778571-57-6. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mamorona sy ny famokarana maotera avy amin'ny gram ka hatramin'ny filahatry ny vovo-dronono Magnesium L-Thononate (778571-57-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Magnesium L-dônerôna vovoka dia iray amin'ireo fahasimbana goavana indrindra amin'ny tontolo andrefana, izay tena mampanahy tokoa noho ny fandraisan'anjaran'ny mineraly amin'ny fihetsiketsehana enzymatika 300 ao amin'ny vatana. Ny magnesium threonate dia iray amin'ireo endrika faran'izay azo amin'ny magnesium ary indrindra amin'ny fampivoarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny atidoha.
Magnesium L-fandraisana horonantsary vovo-dronono
Ny Magnesium Rohahy L-dia miteraka karazan-tsiranoka fototra
Name: Magnesium L-dônerôna vovoka
Molekular lanja: 294.49
Vokatry ny Magnesium L-dônerôna ny tsiranoka amin'ny fampiroboroboana ny atidoha sy ny fiakarana fanampiny
Rongony Magnesium L-fampidiran-dronono
Ny dingan'ny dingan'ny magnesium dia manodidina ny 1-2 gram mba hanomezana vola kely be dia be amin'ny magnesium elementell. Ny ankamaroan'ny porofo dia manondro manodidina ny 200 mg ny magnesium elemental isan'andro sy ny tazo dia iray amin'ireo loharano tsara indrindra.
Fampitandremana momba ny vovo-dronono vita amin'ny magnesium L-dônerôna
Ny fanafody entina amin'ny magnesium dia miova arakaraka ny habetsahan'ny magnesium mila ny vatana, noho izany dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny sehatra hafa amin'ny famenoana. Raha misy magnesium be loatra, ny vatany dia hiankin-doha fotsiny araka izay ilainy. Na izany aza, dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo sy ny aretim-pivalanana ny dosie tafahoatra.
Ny mpikaroka dia manoro hevitra fa ny vovo-dronono Magnesium L-Thononate dia afaka mamolavola ny sehatry ny sakafo ara-tsaina ary manampy ny rehetra hahatratra sy hiorina tsara indrindra amin'ny asa rehetra ao amin'ny dingana rehetra.
Soa ihany, ireo mpikaroka ao amin'ny MIT dia nahita fa ny vovo-dronono "Magnesium L" dia afaka mampitombo ny habetsahan'ny magnesium ao amin'ny atidohanao. Tsy izay ihany, ny mpikaroka dia nanamarika fa ny vinaingitra Magnesium L-Thononate dia nanatsara ny fotoana fohy sy ny fahatsiarovana maharitra
Tamin'ny fikarohana natao tany amin'ny gazety malaza Neuron tao amin'ny 2010, ireo mpikaroka MIT dia nanakona ny endriny rehetra amin'ny magnesium fanampiny ary naseho tamin'ny modelim-biby iray fa ny vovo-dronono "Magnesium L" -drononatena-ary ny solunatine L-thrononate ihany no afaka miditra ao amin'ny atidoha ary manatsara ny lanjan'ny magnesium. Ao amin'ny fanandraman'izy ireo, io fitomboana ao amin'ny atin'ny magnesium ao amin'ny atidoha io dia nahatonga ny tombontsoa azo avy amin'ny fepetra mahomby.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny magnesium
Ny fikarohana vao haingana momba ny dinghy magnesium dia notanterahan'ny mpahay siansa tao amin'ny UCLA, saingy nihanitombo ny fanadihadiana noho ireo tombontsoa maro. Ny tombontsoa goavana iray misy ny magnesium threonate dia ny fanangonam-po. Betsaka ny antsasaky ny karazana magnesium isan-karazany, anisan'izany ny sasany izay tsy misy tanteraka mihitsy, io dia toetra tsy fahita firy.
Raha vao niampita ny sakana amin'ny ati-doha ny magnesium, dia mandeha amin'ny asa ny fanatsarana ny famolavolana fahatsiarovana amin'ny fotoana lava sy fohy. Satria ny magnesium dia mifandray amin'ny enzymes izay manalavitra ny lalan'ny synaptika (fifandraisana ao amin'ny atidoha), ny fanampiana amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany fa tsy mitodika amin'ny fahatsiarovan-tena ihany koa, fa koa mitahiry azy ireo amin'ny fahanterana.
Ny tombony hafa amin'ny magnesium threonate dia ny hatsaran'ny kalitaoma tsara kokoa. Araka ny fanadihadiana 2002 ao amin'ny diarin'ny Pharmacopsychiatry, dia miteraka ny mpitsabo sy ny fifindrana antsoina hoe GABAergic sy glutamatergic ny magnesium threonate. Ireo mpahay siansa dia nandalo tamin'ny alalan'ny fitsapana EEG teo amin'ny atidoha mba hahitana ny menaka magnesium manampy ny kalitaon'ny torimaso.
Noho izany antony izany ihany, maro ireo olona mandoro ny menarana magnesium no mahatsapa ihany koa fa voatsindry sy tsy mitebiteby noho ny antony hafa.
Magnesium L-Thononate Raw Powder
Ahoana no hividianana vinaingitra Magnesium L-menaka avy any AASraw
Noopept (GVS-111) vovoka